Iimaphu zikaGoogle azizukuvumela ukuba utsibe indawo yakho elandelayo yokumisa kwezothutho | Iindaba zeGajethi
Iimephu zikaGoogle sesinye sezixhobo ze-intanethi ezisetyenziswa kakhulu. Oko kwavela ngo-2005, esi sixhobo siye safumana izigaba ezahlukeneyo kunye nophuculo. Uyilo lwayo kutshanje lwenziwe ngokutsha kwaye ngoku umsebenzi omtsha onomdla kakhulu wongezwa kwabo basebenzisi bahlala besebenzisa izithuthi zikawonkewonke yonke imihla okanye benze ukhenketho kwaye abafuni ukutsiba ibhasi, uloliwe okanye isitopu semetro.
Uhlaziyo lwamva nje lweMaphu zikaGoogle- ze-Android okwangoku-ngoku Iya kukuvumela ukuba ufunde inyathelo ngenyathelo zonke iintshukumo ekufuneka uzenzile kuhambo lwakho lwemihla ngemihla ngezithuthi zikawonkewonke. Ukongeza, into enomdla kukuba ezi zaziso ziya kusebenza nokuba isikrini sitshixiwe okanye ngexesha lokwenziwa kwezinye izicelo: ukufunda iindaba, incwadi ye-elektroniki, ukutyelela iinethiwekhi zentlalo okanye ukubukela ividiyo kwiYouTube okanye kwiNetflix.
Izaziso ziya kuvela njengezaziso kwiscreen nokuba uphi ngalo mzuzu. Ngale ndlela umsebenzisi uya kwazi ngalo lonke ixesha indawo yokumisa elandelayo kunye nexesha lokwehla kuloliwe, ibhasi okanye i-metro. Nangona singazi ukuba "inyathelo ngenyathelo" liya kufumaneka nini kwi-iPhone, kuyinyani ukuba umsebenzi xa isitopu sakho sifikile siyafumaneka kwi-iOS. Kunjalo, Kwisaziso ngasinye sokungena, umsebenzisi unikwa ithuba lokucofa kuyo aze ayithumele kwesona sicelo siphambili ukuze afumane ulwazi oluneenkcukacha. kwindlela emayilandelwe.
Kwelinye icala, asazi ngenene ukuba iza kusebenza njani kwizithuthi zikawonke-wonke ezisebenza phantsi komhlaba. Ngapha koko, ngaba ulwazi olunikezwe yi-GPS yezixhobo zethu luya kuthembeka ngokupheleleyo? Ngaba kuya kubakho ukulibaziseka kokusebenza? Oku kokunye kokungaziwayo okuza engqondweni. Nangona kunjalo, Iimephu zikaGoogle ziyaqhubeka ukuba yinkokeli engenakuphikiswa kwinkonzo yendawo, Zombini zihamba ngemoto zihamba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iimaphu zikaGoogle azizukuvumela ukuba utsibe indawo yakho elandelayo yokuhamba
Yinto ehlala isothusa kum ukuba ibingafakwanga. Ndiyifumana iluncedo kakhulu xa ucinga ngokuthatha ibhasi kwisixeko esingaqhelekanga.